China Manjilanjana avo milina fonosana diaper zazakely 40 kitapo isaky ny mpanamboatra sy mpamatsy | GACHN
Mautom-pivarotan-tena amin'ny mason-jaza fanamboarana zazakely 40 Kitapo isaky ny minitra
Film na kitapo efa vita
Miasa vita amin'ny milina olombelona, ​​mora sy haingam-pandrefesana haingana.
.Mandeha ny tsy fahombiazan'ny diagnostika amin'ny alàlan'ny fampisehoana tsy fahombiazana
.Ny fahatsapana fihenam-bidy optika elektronika fanaraha-maso ary ny toerana niasa nomerika izay mahatonga ny tombo-kase sy manapaka kokoa.
.Separate PID mifehy ny mari-pana, mety amin'ny fitaovana famonosana isan-karazany.
.Fitaovana karazana sealing, karazana tombo-kase, mpamono afo, tsy misy dikany amin'ny mpanamboatra fametahana fametahana.
Fitaovana fanidiana Terminal, endrika kitapo tsara tarehy kokoa, fanatsarana ny haavon'ny vokatra.
Mampitsahatra ny milina amin'ny toerana voafantina, tsy mifikitra amin'ny antsy ary tsy misy sary fanamboarana loto.
.Pandehanana fanamandozika, miasa tsara, fikojakojana mety.
.Ny fanaraha-maso rehetra dia tanterahana amin'ny rindrambaiko, mety amin'ny fanitsiana ny fiasa sy ny fanavaozana. Fiovana fanovanaManova ny endrika endrika amin'ny fanovana ny haben'ny compnent, 20 minitra fotsiny dia manatsara ny fahombiazan'ny famokarana.Ny fiara mitondra servo fenoAmin'ny alàlan'ny fampifanarahana ny hetsika Mitsubishi sy Yaskawa mifehy ny PLC sy ny rafi-pitaterana lineo servo générale dia miantoka fonosana sy fahamarinan-toerana tena marina izy.
Ny fitaovana miaro dia vita amin'ny bracket alloy aluminium sy takelaka fitaratra organika mangarahara, ary ny hatevin'ny takelaka fitaratra organika mangarahara dia tokony hihoatra ny 7mm.
Ireo fitaovam-piadiana nomanina manokana dia fitandremana fiarovana, amin'ny fitaovana mampidi-doza, ny fitaovana fampitaovana herinaratra sy ny fihetsiky ny hetsika an'habakabaka dia misy marika famantarana fambara fampitandremana mazava.
Ny fitaovana rafitra elektrika mifanaraka amin'ny fepetra arahin'ny GB / T5226.1-2002.
Previous: Mamatsy lamba milina fonosana marina ny zazakely amin'ny mason-jaza voafantina ≥ 98%
Gachn Baby Diaper Packaging Machine PE Na Compl ...
Mofon-jaza fanamboarana zazakely matihanina, Au ...
GM089NY diaper zazakely diaper packing and w ...
Teknolojia Gach teknolojia zazakely / diaper Maki ...